mubvunzo Las vegas unzip
1 gore 7 ago #769 by dogtrack
Hi, vakadhindwa LV paZvn PC dzakasiyana (3GB yakazara). Kushandisa Winrar iyo inokundikana kubvisa mafaira e4.05x.tiz pamwe nefaira 6x.exe. Mune chimwe nechimwe kutaura kuti archive yakaora kana ine mhando dzisingazivikanwe mafaira. Pane imwe nyundo inogona kubudirira here? Kana zvakadaro, ndeupi, tapota?
1 gore 7 ago #770 by Dariussssss
Sawa uye kugamuchira kuRiooooo. Unogona here kutumira izvi pasi peFSX, FSX Steam sub-forum? Iyi nheyo inonzi inonzi inhengo dzeRiooooo Forum kuti dzizvizive ivo pachavo.
1 gore 7 ago #772 by dogtrack
oopps! Kukumbira ruregerero.
1 gore 7 ago - 1 gore 7 ago #773 by rikoooo
Ndakagadzirisa nyaya iyi zvakare, ndakagadzirisa nekushandisa Izarc:
Tora uye isa freeware Izarc www.izarc.org/ ipapo zvinyorani zvakakodzera pane zvinyorwa zvekuchengetedza sarudza "Izarc" uye "Shandisai pane las_vegas_mega_photoreal_scenery"
Iye zvino inoshanda
Kunyange zvakadaro ndinoisa archive itsva kuRiooooo saka mukati maawa mashoma ichagadzirirwa chero ani zvake.
Ndine urombo nekuda kwekuvhiringidzika, hazvisi nyore kubata nemafuta makuru,
Last edit: 1 gore 7 mwedzi yapfuura rikoooo.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: dogtrack
Time chokusika peji: 0.685 mumasekonzi